Umhla My Pet » Umhla My Pet Dating Safety
Umhla My Pet Dating Safety
ukubuyekezwa: Jan. 20 2021 | 3 min ukufunda
Intanethi Dating Advice Safety Tips
ukuthandana Intanethi inokuba ngamava ekhuselekileyo ukuthandana zemveli. Inika ube umda ebanzi ukhetho kwaye ahlale kumgama de ube ukulungele ukuhlangabezana.
Ukuba zange Ndizamile ngaphambi okanye ukuba uxhalabile na amabali Mhlawumbi weva, apha iingcebiso ezimbalwa ukuba niyathandana online ngokukhuselekileyo:
Uthembe ngeendlela zakho. Ukuba into uvakalelwa kunene, kutheni kuthatha ithuba. vu lathi, Ukuba oku akusebenzi, vu nje.
Yigcine iyinyani. Zihtembeke kangangoko unako xa usenza iprofayile yakho, ongafu- niyo yokulahlekiswa ngoko musa ukulahlekisa nabani. Yinto kwakhona nzima kakhulu ukuba ngathi wena 6'2″ xa ngokwenene 5'6″!
Posa i ifoto, kodwa qiniseka awukwazi ukuchonga usapho lwakho, abahlobo, ekhaya okanye emotweni kuyo.
Hlala ulawulo. Musa ukunikezela nayiphi na inkcazelo yobuqu ngokukhawuleza kakhulu okanye iinkcukacha ngeposi ngaphandle esazi kakuhle ukuba ungubani uzinikela ukuba.
Khusela yesazisi sakho. Sebenzisa site lunjengolwethu usithe idilesi yakho ye email kwaye iinkcukacha zakho zoqhagamshelwano.
Ziphephe nayiphi na intetho imali lula kakhulu. Akukho sizathu sokuba kufuneka wakha badize naluphi na ulwazi yemali online.
Musa batsalwa izicelo uncedo lwemali, ukuba umntu ucela imali nokuba ndakha ubuhlobo ethembele kunye nabo, yokuba phantse ngokuqinisekileyo scammer.
Musani ucinezelwe wokudlulisela ulwazi okanye imifanekiso ukuba awufuni kwaye ingakumbi yokuhlangana phambi ukulungele.
Ukuba awuqinisekanga, ukucela ifoto yakutshanje ngubani uthetha ukuba.
Cinga ngento ubhala kwiprofayile yakho naxa bencokola. Ngaba ukudlulisela ilizwi ekunene kwaye injongo?
Lumkela nabani na uthi uthando lwabo olungapheliyo kuwe, ingakumbi ukuba akuzange ukhe wadibana nabo.
Xa ukulungele ukuhlangabezana, khangela amacebiso yethu-mntu ukhuseleko ukuthandana ngezantsi
Ngowe-Person Ukuthandana Advice Safety
Ukuthandana ngokusebenzisa inkonzo online ezifana olwethu ngamava ekhuselekileyo kodwa Ningxamele uvuyile ukuba ngamanye amaxesha Kulula ukulibala ukuba ngaloo ndlela.
Wena ucinga ukuba wadibana umhla online amaphupha akho okanye mhlawumbi ufuna nje ukwazi kodwa wavuma uye kumkhawulela. Nibe dater wamagorha okanye mhlawumbi wayebuyela ukuthandana emva ubudlelwane uye waphela kodwa apha amanye amagama ekhawulezayo cebiso yokuhlangana phezulu:
Musa zidudulelwe ngomhla ngokuqinisekileyo musani nikelani iinkcukacha zakho zobuqu zoqhagamshelwano ngaphandle kokuba awunangxaki ukwenza njalo. Ungaze unikele idilesi yekhaya lakho okanye ofisi ngaphandle kokuba aqiniseke ngokupheleleyo ukuba uyayazi kwaye unokuyithemba nomhla lwakho.
Kuphephe nabani na othetha ngesondo okanye izimali phambi nokuba ukhe wadibana nabo. Lumkela nabani na uthi uthando olu kuwe ngokulula kakhulu.
Xa udibana kwabo imihla embalwa yokuqala, khetha indawo kawonke cala ukuba zifikeleleka lula kuni nobabini kwaye ngaphakathi kwimboniselo nokuva umgama abanye abantu.
Xelela umntu omthembileyo ngubani na iintlanganiso, apho uya khona yaye ixesha uceba ukuba kubekho. Ukuba izicwangciso zakho abatshintshayo musa ukulibala ukuba uhlaziyo.
Cwangcisa umntu 'khangela’ rhoqo kwaye nendlela enekhowudi ye ebaxelela ukuba izakuba, ingakumbi xa ufuna uncedo.
Uthembe ngeendlela zakho, ukuba ucinga ukuba kukho into engalunganga, kufuneka wenze ngembeko sisingxengxezo ashiye.
Ungaze uthembele ngomhla wakho sothutho okanye endaweni yakho intlanganiso, ingakumbi ukucwangcisa uhambo ikhaya lakho xa ufuna ukushiya ngokungalindelekanga. Yiba inani sekabhe ngesandla ukuba ufuna enye.
Ukuba ngaba kufuneka ukuya ekhaya kunye sekabhe, zama bathotywe yokugqibela, kodwa kungcono ukuphepha ebonisa umhla wakho uhlala kanye apho.
Qhaphela xa utywala ukuze ugcine Butshone wakho malunga. Ukuba ucinga ukutya okanye usele igqwethiwe ngoko musani siyigqibe.
Qinisekisa ukuba ifowuni ityala ngokupheleleyo imizuzu ngokwaneleyo.
Malunga ukuba umhla wakho usenokuba iinkxalabo ezifanayo kwaye musa ukutyhala zibe ukwenza nantoni a yi bakholisekile.